‘ए’ डिभिजन लीग : यस्तो हुनेछ प्रतियोगिता
शर्माले भने, “हामीले लिग हुने दुवै मैदानमा सिसी क्यामेरा राख्नेछौँ, यस्तै अर्को क्यामेरा पनि हुनेछ, म्याच फिक्सिङ भए फिफा र एएफसीको नियमअनुसार कारवाही गर्छौँ ।”
काठमाडौँ, १२ असोज । शनिबारदेखि शुरु हुने शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा खेल मिलेमतो गरे कडा कारवाही हुने भएको छ ।
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) द्वारा गठित लिग कमिटीले खेल मिलोमतो रोक्न इन्ट्रिगिटी अधिकृतले विदेशमा तालीम लिएर आएको बताए ।
लिग संयोजक विज्ञानराज शर्माले भने, “हामीले लिग हुने दुवै मैदानमा सिसी क्यामेरा राख्नेछौँ, यस्तै अर्को क्यामेरा पनि हुनेछ, म्याच फिक्सिङ भए फिफा र एएफसीको नियमअनुसार कारवाही गर्छौँ ।” लिगका खेलहरु सातदोबाटोस्थित एन्फा मैदान र हल्चोकस्थित शसस्त्र प्रहरी बलको खेल मैदानमा हुनेछ ।
साङ्गीतिक प्रस्तुतिका साथ लिगको उद्घाटन हुने जानकारी एन्फाले दिएको छ । नेपालका चर्चित कलाकारको प्रस्तुति रहने उक्त साङ्गीतिक प्रस्तुति ४५ मिनेटको हुनेछ ।
उद्घाटनका अवसरमा विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा) का दक्षिण एशिया ‘रिजनल डेभलपमेन्ट अफिसर’ प्रिन्स रफस समेत नेपाल आउने एन्फाले जनाएको छ ।
एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले हल्चोकमा हुने लिगका खेलहरुको टिकट मूल्य रु. २०० र एन्फा कम्प्लेक्समा हुने खेलका लागि रु. २०० र रु. ५०० राखिएको जानकारी दिए ।
चार वर्षपछि हुन लागेको लिगको उद्घाटन खेलमा न्युरोड टिम (एनआरटी) र विभागीय टोली त्रिभूवन आर्मी क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
रेलिगेसन नहुने लिग आगामी माघ १६ गतेसम्म हुनेछ । लिगमा १४ ’ए’ डिभिजन क्लबले खेल्ने छन् । जसमा थ्री स्टार, मनाङ मस्र्याङ्दी, नेपाल पुलिस, एपीएफ, आर्मी, जावलाखेल युथ क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब, सङ्कटा, मछिन्द्र क्लब, सरस्वती युथ क्लब, च्यासल युथ क्लब, न्युरोड टिम (एनआरटी), ब्रिगेड ब्वाइज र हिमालयन शेर्पा क्लब रहेका छन् । राउण्ड रोविन लिगको आधारमा हुने प्रतियोगितामा कुल ९१ खेल हुनेछ ।
लिगको विजेताले रु. ५० लाख पाउनेछ । यस्तै लिग विजेता टोलीले एएफसी एशियन कप फुटबलमा सहभागिता जनाउन पाउने छन् । लिगको उपविजेताले रु. ३५ लाख र तेस्रोले रु. २५ लाख पाउने जनाएको छ ।
लिगको चौँथो टोलीले रु. १५ लाख, पाँचौ टोलीले रु. सात लाख र छैटौँले रु. पाँच लाख पाउनेछन् । फेयर प्ले टिमले रु. एक लाख पाउने छन् । प्रत्येक खेल जितेबापत एन्फाले क्लबलाई रु. ५० हजार तथा म्यान अफ दि म्याच खेलाडीलाई रु. १० हजार दिने छन् ।
लिगको तयारीका लागि एन्फाले क्लबहरुलाई रु. २० लाख उपलब्ध गराइसकेको छ । ‘ए’ डिभिजन लिग चार वर्षपछि हुन लागेको हो । पछिल्लो पटक विसं २०७१ सालमा ‘ए’ डिभिजन लिग भएको थियो ।
एसियाली फुटलब सङ्घ (एफसी) र विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा) ले नेपालमा फूटबलको माहोल सिर्जना गर्न ‘ननरेलिगेशन’ लिग गर्न यसअघि नै अनुमति दिइएको छ ।
म्यानचेस्टर सिटीका फरवार्ड गाब्रियल आर्सनलमा अनुबन्ध
नेपाल पुलिस क्लबले न्यू डायमन्ड कप भलिबलको उपाधि जित्यो